E-News Nepali || Fast and Accuracy » यस्तो परिवार : जसमा बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज! बाबुआमा, छोराको यस्तो थियो पहिलो उडान !
यस्तो परिवार : जसमा बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज! बाबुआमा, छोराको यस्तो थियो पहिलो उडान !
कोठाका भित्ताभरि दर्जन तस्बिर छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरला’इन्सका सुरुवाती दिनदेखिकै जहाजका तस्बिरहरूले उनको कार्यकक्षको शोभा बढाएको छ ।
तस्बिरमा भएकामध्ये कति’पय जहाज अहिले ‘फेज आउट’ भइसकेका छन्, कति चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्डेड अवस्थामा ‘घाम तापिरहेका’ छन् । उनको बाल्यकाल तिनै जहाज उडाउने पाइलट बन्ने सपनाका साथ बित्यो । जबकी अभिभा’वक चाहन्थे उनी डक्टर बनुन् ।
अभिभावकको इच्छा विपरित पाइल’टका रूपमा उनले जहाज उडाउन थालेको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ । उनी अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको पाइलट हुन् । यति मात्र होइन अपरेसन म्याने’जरका रूपमा निगमको नेतृत्व तहको जिम्मे’वारी समेत सम्हाल्दै छन् । उनी हुन् दीपु जुहार्चन ।
बाबु-आमा-छोराको त्यो उडान सुन्धारास्थित नेपाल वायुसेवा निगमको चौथो तल्लामा रहेको उनको कार्यालयका भित्तामा सजिएका जहा’जका फोटोबारे उनले भने, यो कोठामा पुरै हिस्ट्री छ।
जहाजको ‘हिस्ट्री’ उनको कार्यकक्षका तस्बिरमा छँदैछ । तर निगमसँगै उनको परिवारको ‘हिस्ट्री’ पनि जोडिन्छ । दीपु’को परिवार निगमको सुरुआती दिनसँगै यो क्षेत्रमा ‘जोडिन पुगेका हुन् ।
मुस्ताङ सदरमुकाम जोम’सोमबाट २ घण्टाको पैदल दुरीमा पर्छ एउटा सुन्दर बस्ती मार्फा । त्यहाँबाट राजधानी पुगेर पढ्ने पहिलो व्यक्ति थिए, यामप्रसाद जुहार्चन । सिद्धार्थ वनस्थलीबाट एसए’लसी गरेपछि यमप्र’साद पाइलट तालिमका लागि अमेरिका गए ।
बाबुले पाइलट बन्ने बाटो रोज्नु पछाडिको कारणबारे दीपु अनभिज्ञ छन् । अहिले हवाई र सडक’मार्गले जोडिए पनि त्यतिबेला पोख&राबाट म्याग्दीको बेनी हुँदै ३–४ दिन हिँडेर मार्फा पुग्नु’पथ्र्ये। त्यसैले पनि हवाइ यात्राबाट यो दुरी छोट्याउने बुवाको रहर होला जस्तो लाग्छ दीपुलाई ।
आमा सुमिली भने धरानकी हुन् । लामो समयदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत उनी पनि पछि एयर होस्टेस भएर नेपाल वायुसेवा निगममा प्रवेश गरिन् । अर्थात यामप्रसाद निग’ममा पाइलट भए, सुमिली एयर होस्टेस भइन् ।
कहिले यामप्रसादले उडाएको जहाजमा सुमिली एयर होस्टेस हुन्थिन्, कहिले सुमिलीको ड्युटी परेको जहाज उडाउने पालो यामप्रसादको पर्थ्याे । मन न हो, एउटै संस्था (निगम) र उडा’नमा हुने लगातारको भेटले दुवैबीच प्रेम अङ्कुरायो । उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए ।
याम’प्रसाद पाइलट हुँदा दीपु पोखरास्थित गण्डकी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थे । आमाबाबु दुबैको व्यस्त’ताका कारण उनलाई होस्टेल राखिएको थियो । स्कुले जीवनमा भए पनि रेडियो र टेलिभिजनमा उनको मोह धेरै नै थियो ।
प्रकाशित मिति २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०४:१८
पार्टी ओलीले होइन, माधव नेपालले फुटाएको होः कर्ण थापा